Ihowuliseyili Ecomomic laminate floor EIR Series Manufacturer and Supplier | Moyo
Ubukhulu: 1220X170mm,1220x200mm, 810X150mm
Ubukhulu: Ubungakanani: 8mm 10mm 10.5mm 12mm
Imigangatho elaminethiweyo ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba yimigangatho yomthi elaminethiweyo, nangona ingumthi kuphela ngeendlela ezimbini. Okokuqala, isiseko somgangatho we-laminate siqulathe amasuntswana eenkuni ezicinyiweyo. Okwesibini, umphezulu unenkangeleko yomthi wokwenyani ngenxa yomaleko ochanekileyo wemifanekiso-ngokuyinene ifoto enikezelwe kakuhle yomthi efakwe kumaleko acacileyo, ahlala ixesha elide.
Amasuntswana eenkuni ahlanganisiweyo aphantsi koxinzelelo oluphezulu ukwenza iifom. La maphepha anomfanekiso wefotorealistic womthi okanye ilitye elongezwe phezulu, kwaye lo mfanekiso ugqunywe ngumaleko wokunxiba. Umaleko wokunxiba, iphepha elomeleleyo, elincinci, nelicacileyo leplastiki, sisinxibelelanisi esiphakathi kwezithambisi ezisezantsi kunye nezinto zangaphandle ezinjengomswakama, imitha ye-UV kunye nokukrwela.
Nxiba Uluhlu:Umgangatho weLaminate ngumaleko ongaphezulu wamaphepha amabini amancinci ephepha afakwe i-melamine. Olu luhlu lomphezulu ophezulu kakhulu luhlobo lweplastiki olungenakuchukunyiswa ezinjeni, izitulo, izithende eziphakamileyo kunye nezinye izinto eziqhelekileyo ezonakalisayo.
Ulwaleko Lomfanekiso: Nokuba ujongwa kufutshane nomgangatho wokulaminetha kunokujongeka njengokufanelekileyo. Oku kungenxa yokuba umfanekiso we-laminate womgangatho weefoto wokhuni lokwenyani phantsi kokwaleka kokunxiba.
Uluhlu loSeko (uCore):Ngaphantsi kwefoto yengqolowa yeenkuni imalunga nesiqingatha-intshi yezinto zomthi. Naluphi na uhlobo lwemveliso yeplanga yeplanga oluchaphazeleka ekubeni semngciphekweni wokonakaliswa ngamanzi. Isiseko somgangatho olaminethiweyo sithathwa njengezizinzileyo, kodwa ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile. Iya kuma ngokuchasene namanzi, kodwa kuphela ukuba la manzi asuswa ngokukhawuleza.
Ngaba i-laminate eco-friendly?
Impendulo yalo mbuzo ixhomekeke kwinkcazo yakho ye-eco-friendly flooring, kodwa ewe-ngokubanzi, ewe! I-Laminate yenye yezona ndawo zinobungqongileyo kwindalo phaya.
Kungenxa yokuba isebenzisa izinto eziphilayo (i-fiberboard okanye i-plywood) kumaleko wayo ongundoqo, kwaye kuphela sisixa esincinci kakhulu sezinto zokwenziwa kuludwe lwaso lokunxiba. Oku kuthetha ukuba ubukhulu becala inokuphinda isebenze.
Xa kuthelekiswa ne-vinyl, oku kwenza i-laminate ikhethe ngakumbi eco-friendly. Enye yeengxaki ezinkulu kwi-vinyl plank flooring kukuba yenziwe ngokupheleleyo ngeplastiki. Oku kuthetha ukuba, ngaphandle kwezinye zeempawu ezincinci ezinje ngeProximity Mills, ayisebenzi kwakhona.
Egqithileyo Igumbi lokuhlambela leplastiki leplanga le-bamboo sheet PVC lenjongo yesilingi
Okulandelayo: Umgangatho weplamin kwimibala yeparquet